Maxaa kasoo baxay kulankii Arsene Wenger iyo guddiga Arsenal dhaxmaray maanta? - Hablaha Media Network
Maxaa kasoo baxay kulankii Arsene Wenger iyo guddiga Arsenal dhaxmaray maanta?
HMN:- Arsene Wenger ayaa ka helay war wanaagsan Stan Kroenke oo ah ninka isla leh saamiga ugu badan kooxda Arsenal kaasoo ku wargeliyay macalinkaan inuu sii joogi doono kooxda.
Warkaan ayaa waxa uu kasoo baxay kulan guddiga Gunners maanta oo talaadada ah la qaateen macalin reer France oo shaki weyn la gelinayay mustaqbalkiisa kooxda.
Arintaan ayaa ka dhigan in Wenger uu saxiixi doono heshiis cusub oo labo sanno ah maalmaha soosocda.
Kroenke, oo xubin kamid ah maamulka Arsenal ah ayaa daawanayay markii Gunners FA Cup ku guuleysatay 72 saacadood,
Macalinka reer France ayaa la fahamsan yahay inuu u sheegay maamulka saamiga ugu badan kooxda iska leh sida uu u doonayo inuu kaga qeyb qaato dib u dhiska kooxda.
Wenger ayaa taageere weyn ka heysta milkiilaha kooxda, taasoo la micno ah in Kroenke uu ku kalsoon yahay joogitaanka macalinkaan.
xubnaha guddiga Gunners ayaa hadda go,aansaday in Wenger uu sii joogi doono kooxda xili ciyaareedka dambe, waxaana ilaa khamista la filayaa inuu saxiixo macalinkaan qandaraas cusub oo labada sanno ah.
madaxda ayaa soo jeediyay in isbedelo lagu sameyn doono habka Wenger uu ugu maamulo kubada cagta.
Sanadihii la soo dhaafay, kooxda ayaa lumisay saxiixyon waaweyn, iyadoo Gonzalo Higuain iyo Luis Suarez ay yihiin ciyaartooyda ugu waaweyn ee uu ku qasaaray saxiixooda macalin Wenger.
Mesut Ozil ayaa daqiiqadii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga ciyartooyda, kuso kordhiyay sanadkaan kooxdiisa, laakiin waxaa lagu dhaliilay lumintii labada weeraryahan ee Gonzalo Higuain iyo Luis Suarez.
Sidoo kale ajandaha kulanka manta waxaa kujiray in qandaraaskiisa loo kordhiyo Ozil iyo Alexis Sanchez.